HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 26-JULY-2020
Sunday July 26, 2020 - 09:16:42 in Wararka by Mogadishu Times
Guddoomiye Mursal oo ka hadlay kalsooni dii lagala noqday RW Kheyre Guddoomiyaha G/Shacabka Maxamed Mur sal Sh.Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay kal soo nidii Shalay Xildhibaana da G/ Shacabka ay ka la noqdeen Xukuumad da R/ Wasaare Xa san Cali Kh
Guddoomiye Mursal oo ka hadlay kalsooni dii lagala noqday RW Kheyre Guddoomiyaha G/Shacabka Maxamed Mur sal Sh.Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay kal soo nidii Shalay Xildhibaana da G/ Shacabka ay ka la noqdeen Xukuumad da R/ Wasaare Xa san Cali Kheyre. Guddoomiye Mursal oo war baahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxaa uu sheegay in kulankii Shalay ee Xildh ibaanada kalsoonidii loogala noqday Xu kuu madii R/Wasaaare Khe yre, isla markaana nati ijada kasoo baxday Co deynta uu ku dha waa qay. Guddoomiye Mursal ayaa waxaa uu R/Was aare Kheyre iyo Xukuumadiisa uu ku eedee yay inay fashilmeen sugida amniga M/ Muqdi sho iyo in dalka Soomaaliya ay gaarsiiyaan in ay ka dhacdo Doortasho qof iyo Cod ah. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Max amed Mursal ayaa waxaa uu shaaciyay in 178 Xildhibaan ay Cod gacaan taag ah u qadeen in kalsoonida lagala noqdo Xukuumadda, 170 ay uu sheegay inay ogolaatay, halka ay diideen 8 Xildhibaan. Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu si deg deg ah u furay inuu kusoo magacaabo Ra'iisul Wasaare Cusub iyo Xukuumadiisa. Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Xuk uumadda Soomaaliya oo ay uga hadlayaan kal soonimadii Shalay ay Xildhibaanada Golaha Shacabka kala noqdeen.
Wasiir Islow” Waa maalin mugdi ah”
Wasiirka Amniga XFS .Md. Maxamed Abu ukar Islow Ducaalle ayaa si adag u diiday in xil ka laga qaaday R/Wasaaraha Soomaaliya & Xukuumaddiisa.
Waxaa uu sheegay in Xildhibaano doonaya Muddo kororsi ay Shalay carqaladeen kulankii Xildhibaanada G/Shacabka ayna sheegeen in XFS Xilka laga qaaday.
"Waa maalin umada Soomaal iyeed mugdi u ah in guddoon ka baarlamaanka uu si sharci darro ah udhaqmay. Waxaan laga ra baa inuu keneo caddeyn ah in ay dood dhacday, eedeynta loo soo jeediyay xukumadda, xildhibaannada ay koodeen. Wax aas oo dhan ma dhicin, waana nasiib darro”, ayuu yiri Xildhibaan Ducaale, oo ah sidoo kale ah wasiirka amniga gudaha.
Waxaa uu sheegay W.Islow Gudoonka BFS ay rabaan Mudo korosi aan socon doonin, isla markaana aysan aqbali doonin haddii ay yihiin xukuumadda Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in Mudddada gaaban ee hartay aan lagu mashquuli doonin dhism aha Xukuumad cusub taas badalkeeda ay ku dadaali doonaan in xaaladda dalka wax laga badallo oo doorashadu ku dhacdo waqtigii loo gu tala galay.
Aqriso: Magacyada sideeda xildhibaan kaliya ee diiday ‘xil ka qaadista’ R/W Kheyre
Kulankii xildhibaanada golaha shacabka ee la sheegay in kalsoonida loogala noqday xukuumadda Xasan Cali Kheyre waxaa soo xaadirtay 179 xildhibaan. Sida uu ku dhawaa qay guddoomiyaha G/Shacabka Md .Mursal, waxaa kalsoonida in lagala noqdo xukuumad da u codeysay 170 xildhibaan, waxaana soo hartay 9 xildhibaan.
Caasimada Online waxay soo ogaatay mag acyada 8 xildhibaan oo si ad ag uga hor yimid wixii ka so cday xarunta ee lagu tilmaa may kals ooni kala noqoha da iyo halka uu ka baxay co dka xildhibaanka 9aad oo aan isagu dhanba u codeyn.
Xildhibaanka aan dhana u codeyn ee ku su gnaa xarunta waa Maxamed Cabdi Xayir Maar eeye ahna wasiirka warfaafinta xukuumadda la riday.
Weriye ku sugnaa xarunta xilliga sida dirqi ga ah codka loogu qaadayey XFS ayaa Caasi madda Online u sheegay in Maareeye uu soo baraarugay goor dambe, isla markaana uu yiri oo kaliya "oo hadda xukuumadii ma la cunay?”
8 da xildhibaan ee kale aad ayey uga dag aalameen codeyntii dhacday, waxayna qaarko od sameeyeen gacan qaad, kuwaas oo kala ah.
1 –Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Duc aale ahna Waiirka amniga Xukuumadda la rid ay ee Ra’iisul wasaare Kheyre,
2 – Xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xas san ahna Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diin ta xukuumadda dhacday,
3 –Xildhibaan Cismaan Cabdi Daallo ahna Wasiir ku xigeenka dekadaha iyo gaadiidka Badda,
4 – Xildhibaan Aadan Isaaq Maxamed ahna Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda dhacday,
5 – Xildhibaan Xasan Cabdi (Xasan Firinbi)
6 – Xildhibaan Xuseen Iidow,
7 – Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow,
8 – Xildhibaan Cabdullahi Gaafow Maxamuud.
Xildhibaan Aadan Isaaq Maxamed sidoo kal ena ah Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaa finta waxa uu sameeyey gacan qaad isagoo qa lan uu gacanta ku hayey xildhibaan kale wajiga uga dhuftay.
Sidoo kale Xildhibaan Maxamed Abuukar Is low Ducaale ahna Waiirka amniga waxa uu jar-jaray fiilada marafoonkii uu ku hadlayey gudd oomiye Mursal, isaga aad u careysan. Xigasho:Caasimadda.net
Madaxweyne Farmaajo oo aqbalay go’aan ka G/Shacabka ee Kalsooni kala-noqoshada Ra’iisul Wasaaraha
Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Ma xamed Farmaajo waxaa soo gaaray go’a anka ay Xildhibaannada G/Shacabka ee codka kalsoonida ay kagala noqdeen Xukuumadda R/Wasaare Kheyre.
Madaxweynuhu waxa uu muhiim u arkayey midnimada hay'addaha Dastuuriga ah ee DFS, gaar ahaan marxaladdan aan ku jirno, balse is agoo gudanaya waajibaadkiisa Dastuuriga ah, tixgelinayana awooda Dastuuriga ah ee G/Sha cabka, wuxuu aqbalay go'aanka G/Shacabka.
"Kala fogaanshaha Xukuumadda & hay’adda sharci dejinta waa mid wiiqeysa horumarkii la sameeyay, si taas loo daba qabtana waxaan go’aansaday inaan tixgeliyo codka G/Shacab ka oo ah hay’adda aasaaska u ah qarannimad eenna.”Madaxweyne Farmaajo wuxuu si de gdeg ah usoo magacaabayaa R/Wasaare soo dhisa xukuumad dalkan ka saarta marxalad dan kala guurka ah, siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka.
Madaxweynaha JFS wuxuu uga mahad celinayaa R/Wasaare Xasan Cali Khayre haw lkarnimadii uu muujiyay muddadii uu xilkan hayay iyo wadashaqeyntii wanaagsanayd ee uu la lahaa hay’adaha DFS, isaga oo u rajeeyn aya horumar iyo mustaqbal wanaagsan. DHAMMAAD
Farmaajo oo ku dhawaaqay sii haya xilka R/ Wasaaraha kana hadlay doorashooyinka
Madaxweynaha JFS Md. Maxamed C/hi Fa rmaajo ayaa wareegto Madaxweyne ugu igma day Md.Mahdi M.Guuleed (Khadar) oo ahaa R/ Wasaare Ku-xigeenka XFS sii socodsiinta iyo maareynta howla ha G/Xukuumadda si KMG.
Wareegtada Madaxweynaha ayaa ku saley san inaanu hakad gelin qorsheyaa sha dowla d-dhiska iyo horumarin ta dalk eenna tan iyo inta Madaxwe ynuhu uu ka soo magacaab ayo R/Wasaare soo dhisaya Xuka amad tayo leh oo sii dardarg elisa xaqiijinta yididiillada sha cabka Sooma aliyeed.
Laga bilaabo faafintan, sida uu qabo Das tuurka KMG ah waxa uu Kusime R/Wasaare Md.Mahdi M.Guuleed (Khadar) aw ood u yeelanayaa hagidda hawlaha xukuumad da inta laga soo buuxin ayo xilka Wasiirka 1ad ee XFS.
Madaxweynaha JFS ayaa adkeeyay in ay dalka ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku qa bsoonta oo lagu wada qanacsan yahay, waafa qsanna Dastuurka iyo Sharciga Doorashooyin ka dalka iyo in DFS ay ka go’an tahay ka shaq eynta qodobadii ku soo baxay war-murtiyeedkii Dhuusamareeb iyada oo shirka xiga loo balla nsan yahay 15ka Ogoosto 2020.
Kusimaha Raiisul Wasaaraha oo Magacaabis sameeyay
Kusimaha R/Wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo saar ay ware egtadii u horeysay saacado uun markii xilkaasi loo igmaday.
Md.Mahdi Guuleed waxaa magic aabay Xog hayaha joogtada ah ee Xaafiiska RW, iyadoo la magaca bay Cabdirisaq Xus een Aadan.
Ruuxa la magacaabay ayaa ka mid shaqsiyaadka ku dhow Mada xweyne Farm aajo. Waxaana xilkaas laga qaa day Xogheyihii joogtada ahaa ee la shaqeyna yay R/wasaari hii Shalay codka kalsoonida wa ayay Xasan Cali Kheyre.
Md.Kheyre "Wixii dhacay sharci darro ayay ahaayeen waxaana go’aansaday in aan xil ka Casilo”
R/Wasaarihii hore ee XFS Md.Xasan Cali Kheyre ayaa aqbalay kalsoonidii ay Maanta ka la noqdeen Xildhibaanada G/Shacabka Baar lamaanka.
Xasan Cali Kheyre oo wa rb aahinta kula hadlay M/Muqdi sho ka dib markii uu shalay dib ugu soo laabtay M/Muqdi sho ka isagoo ka soo kicita may M/Dhuusamareeb oo safar shaqo ugu ma qnaa.
Kulan uu la yeeshay xalay xubanah golihiisa wasiirada ka dib ayaa waxaa uu sheegay inuu aqbalay xilka qaadista lagu sameeyo si uu tus aale fiican ugu noqdo ummadda Soomaaliy eed, si uusan uga dhicin Khalalaaso siyaasa deed.
Md.Kheyre ayaa wixii Shalay ka dhacay Xarunta Villa Hargeysa ku tilmaamay inay aha ayeen wax sharci darro ah, xilka qaadistiisa ayuu xusay in aan loo marin hab sharci oo Das tuurka dalka u yaalla waafaqsan.
"Aniga oo og In waxii golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, loona marin habraacii saxda ahaa ee xil ka qaadis xuku umadeed, In xitaa aanay ajandaha ku jirin, ina anay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, Haddane waxaan go’aansaday inaan is ka casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay, aniga oo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato. Si aan ugu turo shacabka Somaaliyeed, qayb na uga noqon Khalkhal iyo dib u dhac siyaasa deed, mid dhaqa ale, amni iyo bulsho” ayuu yiri RW hore ee dalka Kheyre.
Isaga oo sii hadlaayay ayuu u mahad celiyay
Madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo oo uu xusay inuu fursad u siiyey inuu u adeego Umm adda Soomaaliyeed, wuxuu sidoo kalena u ma had celiyey Xukuumadiisa, saaxiibada Beesha Caalamka iyo Ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn R/Wasaarihii hore ee Soom aaliya ayaa shacabka ka codsaday
inay cafiyaan haddii uu qalad ka dhacay inta uu haayay xilka R/Wasaaraha dalka, isagoo sheegay in muddii uu xilka haayay uu wax bad an ka qabtay dalka.
Si kastaba Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa xilka R/Wasaaraha Xukuumadda loo Magaca abay 23-kii bishii Feberaa yo ee sanadkii 2017, waxaana Xildhibaa nada G/Shacabka ay Cod ka kalsoonida siiyeen 1-dii bishii Mach 2017.
Xisbiga Wadajir oo ka soo horjeestay xilka qaadista Ra’iisul Wasaare Kheyre
Qoraal uu soo saaray xisbiga Wadajir ayaa lagu sheegay in xisbigu uu ka soo horjeedo xil ka qaadista uuna yahay mid aan loo marin hab sharci ah oo dastuurka waafaqsan.
Xisbiga Wadajir ayaa waxa uu ku macneey ay ujeedka xilka qaadista inay tahay mid lagu carqaladaynayo ka miradhalinta natiijada shir ka Dhuusamareeb. Sidoo kale, Xisbiga Wada jir ayaa ku baaqay in lagu gacan siiyo xukuumada inay ka miro dhaliso natiijada shir ka Dhuusamareeb. Ugu dambeyntii xibsiga Wadajir ayaa ka digey in muddo korosi uu ka dhaco dalka.
Halkan ka aqriso qoraalka ka soo baxay Xisbiga Wadajir;
Madasha Xisbiyada oo caddeysay Mowqifk eeda kalsoonidii lagala noqday RW Kheyre
Madasha Xisbiyada Qaran ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sh. Shariif ayaa caddeysay mowqifkeeda ku aadan xilka qaadistii lagu sameeyay R/Wasaaraha XF/ So omaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Golihiisa Wasiirada.
War-saxaafadeed kasoo baxay Mada sha Xisbiyada ayaa waxaa lagu sheegay in Madashu ay kalsooni noqoshadii Xukuu madda ay u aragto mid ujeedadiisu aheyd carqaladeynta iyo burburinta Go’aanadii kasoo baxay Shirkii M/Dhuusamareeb, loo guna gogol xaarayo muddo kordhin.
Ayaa tilmaamtay inay aad uga xun tahay in xiligaan oo waqtiga Hay’addaha Dastu uriga uu sii dhamaanayo in Madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo uu hormuud ka noqdo qalaalo siyaasadeed oo ay adeg ta hay maareyteeda.
Ugu dambeyn Madasha Xisbiyada Qa ran ayaa ku baaqay in la ilaaliyo is faham ka bilowga ah, isla markaana laga fogaa do wax kasta oo keeni kara qalaalo siyaas adeed oo dalka ka dhaca.
Hoos ka Akhriso Qoraalka Madasha Xisbiyada.
Mareykanka oo ka horyimid xilka qaadistii Kheyre
Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay in tallaabada Madaxweyne Farmaajo & Xildhibaannada Golaha Shacabka ay xilkii u ga qaadeen wasiirkii 1aad ee Xukumadda Somaaliya xasan Cali Kheyre, kaas oo shalay si deg deg ah ay Xil dhibaannada kalsoonida ug ala laabteen.
War kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa la gu sheegay in tall aabada as ay tahay sii kordhineysa xiisada siy aasadeed ee dal ka, isla markaana ay wiiqey so hanaankii wadahadalka ee u dhexeeyay DFS, Dowladaha xubinta ka ah Federaalka. , iyo dan eeyayaasha kale ee muhiimka ah.
Waxaa sidoo kale Mareykanka uu sheegay in Deganaanshaha Soomaaliya, xasilloonida, & barwaaqada lagu dhisi karo keliya iskaashi, isuduwid, iyo isu tanaasulidda hoggaamiyeyaa sha Soomaalida dhexdooda ah.
"Safaaradda Mareykanka waxay sii wadays aa inay carrabka ku adkeyso in dariiqa kaliya ee loo maro waqtigii loogu talagalay, nabad, doorashooyin federaali ah oo la hirgalin karo ay tahay wada tashi ballaaran iyo wada hadal wax ku ool ah oo dhexmara daneeyayaasha. Samaynta qaab doorasho oo la wada shaqeyn karo, oo la aqbali karo oo muhiim ah ayaa fure u ah dhowrista amniga iyo xasilloonida Soom aaliya aya alagu yiri” Warka Mareykanka.
Ugu dambeyn Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa dhammaan hoggaamiyeyaa sha Soomaalida, hay’adaha, iyo daneeyayaa sha ugu baaqday inay ka shaqeeyaan danaha ugu wanaagsan ee waddankooda,isla markaa na DFS, Dowladaha xubinta ka ah federaalka, baarlamaanka, iyo dhinacyada kale inay sii wa daan wada shaqeynta si loo meel mariyo he shiiskii lagu gaaray Dhuusamareeb.
Marka laga soo tago warkaan kasoo baxay Mareykanka ee ku aadan inay walaac ka muuj inayaan qaabka xilka looga qaaday R/Wasaa rihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ay aa hadana Kheyre oo Warbaahinta la hadlay uu aqbalay xilka qaadistaas.
Hirshabeelle oo xarun Caafimaad ka hir-gelineysa degaanka Ceel-jaalle.
Wasaaradda Caafimaadka ee maamul G/ Hir shabeelle ayaa xarun Caafimaad oo cusub ka hir-gelineysa degaanka Ceel-jaalle ee dulee ka M/Baladweyne.
Agaasimaha guud ee W/Caafimaadka Hir shabeelle, Tahliil Ibraahim Cabdi ayaa warba ahinta Qaranka u sheegay in dhaqaalaha ku baxaya dhismaha xarunt an uu bixiyay mutadawa cawe yn ee reer Qadar, Sh. Tha ni bin Abullah Al-Thani, fuli nteedana ay iska kaashan ayaan maa mulka Hirshabeelle iyo hay’adda Save the Children.
Wuxuu sheegay Agaasimuhu in degaanka Ceel-jaalle uu yahay goob ay ku barakacaan in ta badan Dadka ku dhaqan Baladweyne xiliya da ay fatahaaduhu dhacaan, sidaa daraaddee dna ay door bidayaan inay halkaasi ka hir-geliyaan adeegyada asaasiga u ah ee Bulsh ada.
Xaruntan ayaa lagu wadaa in lagu soo ga ba-gabeeyo Bilo gudahood, isla markaana ay fuliso dhammaan adeegyada Caafimaad ee Bulshada ku dhaqan ama u barakaca degaa nka Ceel-jaalle sida uu Agaasimuhu sheegay.
Madaxweynaha Galmudug oo kormeer ay Ciidamo tababar uga socdo duleedka Cadaado
Madaxweynaha maamulka Galmudug Ax med Cabdi Kaariye iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirka amniga Gudaha ayaa Shalay booqday xerada tababarka Ciid amada daraawiishta ee Dhaankaroon.
Booqashadas ayaa qeyb ka ahayd dhiiraga linta iyo u kuurgelidda xaalada ciidamada iyo heerka uu marayo tababarka ciidamada Daraawiishta Galmudug uga socda halka as.
Ciidamada daraawiishata Galmudug ayaa hadda tababar uga socdaa xerooyinka Indhaq aris iyo Dhaankaroone, ayadoo tababarka xero oyinkaas uga socda Ciidamada Daraawiishta uu meel wanaagsan marayo.
Wasaaradda Amniga Gudaha ayaa ku hawlan xareynta iyo uruurinta maleeshiyaadka ku kala firirsan Galmudug, waxaana hadda la qorshaynayaa in la furo xerooyin cusub lagu xaraynayo ciidamo cusub oo daraawiish ah.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Telecom ay aa deeqo waxbarasho oo heer jaamaceed ah siinaysa sanadkii labaad ardayda Soomaali yeed, ee kasoo qalin-jebisay Dugsiga Sare.
Bilowga sanadkii 1aad ee barnaamijka dee qda waxbarasho ee Hormuud Telecom ay aa waxaa is qortay 600 oo arday, waxay na 192 ka mida u suu rt agashay inay imtix aanka tijaabada u fari istaan, waxaana laga xushay 30-kii arday ee ugu dhibcaha badnaa.
Ardayda ku guuleysta imtixaanaadka tijaa bada ee laga qaado ayaa waxay fursad u hel laan inay wax ka bartaan jaamacadaha dalka ku yaala, iyadoo qarashka iyo tashiilaadka ay u baahan yihiinba, ay dusha u ridato Hormuud Telecom, mudada afarta sano ee heerka 1aad, ee ay waxbarashada jaamacadda ku guda jira an.
25-ka bishan July oo Shalay ku beegan wa xay ahayd maalintii is diiwaangelinta ee arda yda rajeyneysa inay ku guuleystaan fursadda waxbarasho, ee ay bixiso Shirkadda Hormuud Telecom (2020/21), waxayna is diiwaangelinta tiradii la rabay ku buux-santay 16 daqiiqo oo keliya, taas oo muujineysa muhiimadda ay ard ayda Soomaaliyeed u leedahay deeqdaan wax barasho. Xilligan waxaa is diiwaangelisay 400 oo arday ah, kuwaa oo lagu wado inay imtixaanka u fariistaan 4-ta iyo 5-ta bisha soo socoto ee August, waxaana laga xulan doo nnaa 30-ka arday ee ugu dhibcaha sareeya.
Hormuud Telecom Scholarship waa deeq wa xbarasho oo sanadle ah, oo Shirkaddu bill owday April 2019, iyadoo ujeedka loo aas-aas ay barnaamijkan yahay in la daboolo baahida waxbarasho ee dalka.
Ardayda nasiibka u yeelato deeqda waxbar asho, ee ay sanadkii 2aad bixineyso Hormuud Telecom ayaa u madaxbannaan yihiin inay xu shaan kulliyada ay daneynayaan, waxaase xu sid mudan ka hor inta aynaan jaamacadaha ku biirin in la siin doono tababaro ku aadan kalliya daha ay jecel yihiin inay ka qalin jebiyaan, taa soo ardayga ka caawineysa inuu faham badan ka haysto waxa uu baranaayo.
Dagaal Khasaare geystay oo ka dhacay Sool
Wararka ka imaanaya Degaanka Adhicad deeye oo qiyaastii 30KM dhanka waqooyi kaga beegan M/Laascaanood ee Xarunta G/Sool ay aa ku warramaya in halkaasi uu Shalay ka dha cay Dagaal u dhexeeya 2 Malayshiya-beeleed.
Colaadda 2da Bee lood ayaa mudda sanna do ah soo jiitamaysay ba lse sida wararku sheega yaan Dagaalka Shalay wuxuu ka bilwoday bogcado dhul oo ku yaalla Degaanka Adhicaddeeye kadib markii ay isku qabsadeen Malayshiyaad ka tirsan Labada dhinac.
Khasaaraha Dagaalkaas ilaa iyo haatan la ga soo weriyay waa dhaawaca hal ruux iyadoo uu haatan Dagaalka joogsaday islamarkaana ay halkaas gaareen Ciidamo ka tirsan Soma liland
Gobolka Sool waxaa sannadihii u dambee yay ka dhacayay Dagaal beeleedyo khasaare badan dhaliyay kuwaas oo dhexmaray Beelo ood wadaag ah inkastoo qaarkood markii dam be Xal Nabadeed laga gaaray.
Booliska Gaarisa oo dilay dad Soomaali ah & rabshado ka dhashay
Ciidamada Booliska M/Gaarisa ee G/W/B ari dalka Kenya ayaa waxaa ay dileen laba qof oo Shacab Soomaali ah, xilli ay ku sugnaa yeen Suuqa Xoolaha Magaalada Gaarisa.
Dilka labada Qof ee Somaalida ah ayaa yim id,kadib markii Suuqa xoolaha ee M/Ga arisa ay soo galeen Ciida mo ka tirsan booli ska Kenya,kuwaas oo baadi-goobayay rag dabiilayaal ah, isla markaana rasaas ay fureen ay ku geeriyoodeen laba qof oo rayid ah.
Ciidamada ayaa sidoo kale xiray Suuqa Xo olaha Magaalada gaarisa,waxaana dilka laba da qof ka dhashay rabashado ay sameeyeen dadka Shacabka ee Magaalada Gaarisa gaar ahaan Soomaalida, kuwaas oo dalbanayay in cadaalad loo helo dilkaas.
Qaar kamid ah Soomaalida M/Gaarisa ayaa waxaa ay sheegeen in dadka la dilay ay ahaay een kuwo dalaal ka ahaa Suuqa M/gaari sa,waxaana ay dalbadeen in dowladda Kenya ay tallaabo ka qaado askartii dilkaasi ka dam beeysay.Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku daraya an in Ciidamadii dadka Shacabka ahaa dilay ay goobta ka baxsadeen,isla markaana ban anabaxyo ka dhashay dilkaasi ay sab abtay in qaar kamid ah Ganacsatada Suuqa M/ Gaar isa hantidooda la boobo.
Guddoomiyaha M/Gaarisa Cali Bunow Qora ne ayaa Bartiisa Twitter-ka ku qoray in gacanta lagu soo dhigo Saraakiisha dilka u geystay dad ka Shacabka ahaa ee ku noolaa Magaalada gaarisa,isla markaana talaabo laga qaado.
Suuqa Weyn ee M/Gaarisa ayaa shalay u xi ranaa,waxaana dad ka carooday dilka labada qof ay taayaro ku gubeen wadooyinka laga ga lo suuqa, iyaga oo diiday in Suuqa la galo lag ana baxo.
Turkiga iyo Giriiga ayaa Sabtida Shalay ahe yd is-dhaafsaday ereyo ad-adag oo ku aaddan tallaabada dhismaha Sophia dib looga dhigay Masjid, maalin uun kadib markii salaadda lagu oo gay goobtan markii u horeysay ee muddo ku dhow 90 sanadood.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Greece oo qoraal jawaab ah soo saartay ayaa sheegtay in "beesha caalamka ee qarnigan 21-aad ay la yaaban tahay iney arkaan ficillada xagjirka diineed iyo kuwa wadaniyadeed ee Shalay ka jira dalka Turkiga.”
Taariikhda Madaxweynihii Geeriyooday ee Tanzania ee Benjamin Mkapa
Madaxweynihii hore ee Dalka Tansaaniya, Benjamin William Mkapa ayaa wuxuu dhintay Jimcihii isagoo jira da’da 81-ka ah.
Gee rida Madaxweynihii hore ayaa Waxaa xaqiijiyay madaxweynaha dalka Tanzinia John Magufuli., isagoo ka Codsaday shacabka wadankiisa in ay u duceeyaan.
Magufuli wuxuu ku dhawaaqay toddobo maa lmood oo baroordiiq ah,iyadoo calanka qaran hoos loo dhigi doono.
Madaxweynaha ayaa ugu yeeray dhamma an reer Tansaaniya in ay "is dajiyaan, samirne yeeshaan oo ay midoobaan inta lagu jiro xiligan adag” sidaa waxaa hadalka ku she egay Afhayeenka madaxweynaha Gerson Msi gwa.
Mkapa ayaa wuxuu xukunka la wareegay xilligii wadanka bariga afrika kuyaala uu ka dhacayay dhaqaalo xumadii aadka u daranayd iyo sicir bararkii baahsanaa, wuxuuna ku guul eystey in uu abuuro dhaqaalaha wadanka oo liitay.
Mkapa, oo ah diblomaasi, wuxuu xilka mad axweynaha hayey 10 sano laga soo bilaabo 1995 ilaa 2005-tii.
Wuxuu ku dhashay 1938-dii degmada Ma sasi ee saboolka ah oo kutaala koonfurta Dal ka Tansaaniya.
Madaxweynihii hore ee Dalka Tansaaniya, Benjamin William Mkapa ayaa wax ku soo bar tay Jaamacadda Makerere ee Uganda halkaas oo uu ku qaatay shahadada digiriiga luuqada Ingiriis-ka, Dhaqaalaha iyo Taariikhda 1962-kii.
Ma uusan joojin Wax barashadiisii waxaa uuna sanadkii xigay u kicitimay Wadanka Mareykan ka isagoo ku biiray jaamacada Columbia ee dal kaasi, waxaana uu ka qalin jabiyay 1963-kii halkaas oo uu ku qaatay shahaadada Maste rka ee Xiriirka Caalamiga ah.
Ka hor inta uusan noqon madaxweynaha, Mkapa wuxuu kusoo shaqeeyey awoodo kal aduwan Sida saxafi ahaan, sarkaal maamulka ah iyo wasiirka sayniska, teknolojiyadda iyo tac liinta sare.
Wuxuu soo noqday wasiirka arrimaha dibad da 1977-kii ilaa 1980-kii iyo mar kale 1984 ilaa 1990-kii
Sannadkii 1995-kii, Mkapa waxaa loo doo rtay madaxweyne ku saleysan olole caan ah oo ka dhan ahaa musuqmaasuqa iyo taageer ada xooggan ee uu aasaasey Madaxweyne Jul ius Nyerere.
Bogga Twitter-ka Madaxweyne john Mag ufuli ayaa lagusoo daabacay in Mkapa uu ah aa waddani dhab ah, hoggaamiye adag oo dhi say dhaqaalaha wadanka, wuxuuna sheegay in qaranku lumiyey tiir adag.
Raila Odinga, Ra’iisul wasaarihii hore ee Kenya ahna hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ODM, ayaa Mkapa ku tilmaamay inuu ahaa saaxiibkii weyn ee dadka Kenyanka ahaa, afrik aanka ah, rumeeyaha dhabta ah ee iskaash iga-South-South iyo dowlad-caalami ah.
IDRIS KHATTAK: 'MA GARANAYO AABBAHAY HALKA LA GEEYEY IYO SABABTA LOO XIRAY'
Taaliya waaliddiinteeda waxay kala tageen iyada oo carruur ah, kaddibna aabbaheed ay aa daryeel waalidnimo oo dhammeystiran siiy ey. Cunta karinta ilaa iyo timaha inuu u hagaa jiyo iyo inuu waxbarashadana geeyo.
"Runti waa abba aad u wanaagsan," ayey tiri Taliya oo 20 jir ah. "Aabbahay waa nola she yda oo dhan, cabsidii oo dhan aabbahay ayaa iga bi'iyey oo isaga ayaan aan ka dugsanayey cabsi oo dhan."
Balse wixii ka dambeeyey bishii November ee la soo dhaafay Taaliya, waxaa soo wajahd ay cabsidii ugu weyneyd. Idiris Khattak, oo ca an ku ah u ololeynta xuquuqda aadanaha, wax aa laga kaxeystay isaga oo gaarigiisa ku dhex jira xilli uu ku sugnaa waqooyiga Pakistan.
Muddo toddoba bilood ah Taaliya aabbah eed halka uu ku sugan yahay wax war kama hayso, iyada oo aan ogeyn sababta loo xiray.
Milatariga Pakistaan ayaa marki dambe sha aca ka qaaday Idris Khattak oo 56 jir ah inuu gacantooda ku jira, iyaga oo sheegay in lagu soo oogayo dacwad la xidhiidha arrima sird oon. Idris Khattak oo u ololeeya arrimaha xuqu uqda aadanaha wuxuu u soo shaqeeyey Hay' adaha Amnesty International iyo Human Rights Watch Taaliya waxay dooneysay iney tareenka ka raacdo caasimadda Islamabad, halkaasi oo ay wax kabarato, si ay uga qayb gasho shir Kar achi ka dhacaya.
Aabbaheed weligii kuma fikirin gabadhiisa iney keligeed iney tareen raaceyso maadaa maa uu marweliba isaga uu geyn jiray goobta waxbarashada maadaamaa uu Pakistan u arko mid aan gabdhaha ammaan u ahayn. "Maalinta la xiri doonana wuxuu iga dalbaday inaan raaco balse iima suuragelin".
"Waxaan dareemayaa inaan dambiila ah ay, maalin walba waan ka fakaraa arrintaa. Ha addii aan aabbahay raaci lahaa maalintaas in aan gaariga ku wehlin lahaa xaaladdiisana wa an la soco lahaa," ayey tiri.
Markii ugu dambeysay oo ay aabbaheed la hadashay wuxuu u muuqday mid degdegsan naqaskana uu dhibayo, maalmihii u dambee yeyna taleefankiisa oo ay marar badan wacda yna ay helin.
Wixii intaa ka dambeeyeyna farriimaha loo diro ama wicitaannada Idiris ma ahayn mid ka jawaabo. Gabi ahaanba taleefankiisi hawada ayuu ka baxay, Taaliyana waxaa u billaawday wal wal iyo cabsi hor leh.
Warbaahinta iyo shabakadaha wararka ee dalka Pakistan waxay billaabeen iney bogaggo oda hore soo dhigaan sawirrada Idiris iyaga oo ka warrama arrinta loo haysto taasoo cabsi hor lehku abuurtay lada hablood uu Idris dhalay.
Idiris waxaa kaxeeyey nin dhar shacab xiran oo loo maleynayey inuu ka mid ahaa sirdoonka Pakistan, isgooyska Khyber oo ku yaalla Pa khtunkhwa oo ah halka gurigiisa uu ku yaallay ayeyna ka kaxeysteen.
Laba maalmood kaddibna qof aan la gara neyn ayaa guriga Idiris tagay wuxuuna qaatay Laptob iyo Hard Disk uu isticmaali jiray oo ay xogta ugu badan ee ku jirta ay tahay sawirrada qoyskiisa oo keli ah.
Muddo afar bilood ah wax war ah kama soo kordhin arrinta Idiris. Taaliya iyo walaashed Shumaisa waxay aad uga walwalsan yihiin xaaladda caafimaad ee aabbahood ma adaamaa uu cudurka macaanka uu qabo oo ay ka shaki qabaan in dawada macaanka sida la rabay loo siinayo iyo inkale.
Hay'adda Amnesty International oo uu Idiris ugu shaqeynayey cilmi-baadhe waxay sheegtay in Idiris qasab lagu kaxeystay xoga gga dowladdana ay kaxeysteen.
"Marwaliba waxaan ka fakarayaa aabba xaaladda uu ku sugan yahay? Waana ogahay aabba inuu naga aamuseen oo uu marwalba nala soo hadli lahaa," ayey tiri Taaliya.
Sida loo joogaba dadka caanka ah in la wa ayo dalka Pakistaan taariikh dheer ayey ku lee dahay waxayna soo billaabatay 1990-kii xillig aasi oo uu dalka Pakistan ka talinayey General Pervez Musharraf. Inta badan dadka la waay ana waxay ahaayeen xubnaha ururka gooni u goosadka gobolka Balochistan iyo dad ka tirsan qowmiyadda Sindhi.
Laamaha sirdoonka ee dalka Pakistan ay aa lagu eedeeyaa iney si adag ay ula dhaq maan dadka xuquuqda bani-aadamka u olole eya, wariyeyaasha iyo dadka dowladda mucaarada.
Madaxa Komishiinka madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha Pakitsan (HRCP) , Harris Khalique dadka ay dowladda Pakistan xabsiga dhigtay ee siyaasadda u xiran iney tiradooda kor u dhaafeyso 2,100.
BBC waxay iskudayday iney dowladda Pak istan jawaab ka hesho balse dowladda dhan keeda wax jawaab ah lagama helin.
Qoyska Idris Khattak iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha waxay billaabeen olole ay ku raadinayan cadaadis caalami ah in lagu soo saaro hay'adha dowladda Pakistan ee ay u xir an yihiin dadka ay la midka yihin Idiris ee siy aasadda u xiran, iyaga oo farriimahooda gaar siiyey Komishiinka Xuquuda Aadanaha ee Qar amada Midoobay iyo Xafiiska arrimaha diba dda iyo barwaaqa sooranka UK iyo hay'ado kale oo caalami ah.
Warbaahinta dalka Iiraan ayaa soo tabiyay in diyaarad dagaal oo uu leeyahay Mareykanka ay si khatar ah ugu soo dhawaatay diyaarad rakaa ah oo laga leeyahay Iiraan, taasoo mareysay khadka hawada ee Suuriya - inkastoo sheegashadaas uu beeniyay Mareykanka.
Wakaaladda wararka Iiraan ee Irib - oo ku hadasha afka dowladda - ayaa sheegtay in duuliyihii diyaaradda Mahan Air uu ku khasbanaaday inuu si deg deg ah u baddalo heerkii uu ku duulinayay diyaaradda, taasoo sababtay in ay dhaawacmaan qaar ka mid ah rakaabka.
"Diyaaradda Mareykanka ee nooceedu yahay F-15, oo roondadeeda caadiga ah ku jirtay, kuna duuleysay hawada Suuriya, waxay si caadi